“အထူးလူ အထူးနေရာ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “အထူးလူ အထူးနေရာ”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Nov 15, 2011 in My Dear Diary | 29 comments
“အထူးလူ – အထူးနေရာ”
၁၉၆၄ခုနှစ် အဲဒီတုန်းက ကျနော် က”သူငယ်တန်းကြီး” ဘဲရှိပါသေးတယ်။
ကျနော်တက်နေတဲ့ကျောင်းကတော့ “စိန့်ပီတာ ခရစ်ယာန်သာသနာပြု ကျောင်း”မှာပါ။
တစ်ခုသောညနေကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ကျောင်းသားမိဘတွေက ကျနော်တို့ကိုအတန်းဝအပေါက်ထိလာကြိုကြပါတယ်။
တစ်ခါမှ လာမကြိုဘူးတဲ့ ကျနော့်အဖေတောင်မှာ ကျနော်ကို လာကြိုတော့ ကျနော်မှာတအံ့တသြ။
“ဖာသားကြီးတွေ ဘရာသားတွေ တီချယ်တို့ ကို ဒီကျောင်းမှာဆက်မထားတော့ဘူး”တဲ့။
“ဒီကျောင်းကို အစိုးရပိုင်သွားပြီ”ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ လိုက်မမှီတဲ့စကားတွေကိုကလေးဘ၀မှာကြားလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအစ အပြောင်းအလဲကို ကျနော်ကလေးဘ၀မှာ
နောက်လူငယ်ဘ၀လွန်မြောက်တဲ့အခါမှာတော့ အရန်ပါတီ ၊တင်းပြည့်ပါတီဆိုတဲ့စကားတွေ၊
မြို့နယ်ကောင်စီ ၊ဗဟိုအလုပ်အမှု့ဆောင်အဖွဲ့ ၊အစရှိတဲ့ခန့်ထည်တဲ့စကားလုံးတွေကအမြဲ
ဒီဆိုရှယ်လစ်စံနစ်နဲ့ချီတက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့စာပေလောကမှာရော တိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ လူငယ်ထုကြားထဲမှာရော ခေါင်းပုံဖြတ်၊ငို့ဘသမား၊သရုပ်မှန်၊ဇူစကာ၊ရေသာခို အချောင်လိုက်၊
ဖောက်ပြန်ရေးသမား၊စားဖား၊ဘ၀သရုပ်ဖော်ဆိုတဲ့ ဒီစကားလုံးတွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးချရုံမက၊
အကြောင်းကိစ္စရှိတာနဲ့ ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး တန်ဘိုးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
“ဆင်းရဲမှ ဘ၀မှန် ချမ်းသာရင်ဖောက်ပြန်”
“ အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မယ်“ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုလဲ လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြပါတယ်။
ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု့ကလဲ လိုအပ်ချက်ပြည့်အောင်လုံလောက်အောင် မထုတ်လုပ်နိုင်တာရယ်ကြောင့်
အစစ အရာရာရှားပါးခြင်းနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီတော့လဲ ခွဲတမ်း၊မှောင်ခို၊တန်းစီတိုး၊ပါမစ်၊မဲနှိုက် စတဲ့စကားလုံးလေးများကလဲ
သစ်လိုချင်ရင်လဲပါမစ် ဘာမဆို ပါမစ်ဆိုတဲ့ ခွင့်ပြုမိန့်ပါမှ လိုချင်တာရတဲ့ခေတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကာလမှာဘဲအများနဲ့မတူတဲ့ သာမန်ထက်ပိုသော အခွင့်အထူးတွေရနေတဲ့
VIP(Very Improtant Person)(အထူးလူ) ဆိုတဲ့လူတန်းစားတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
လိုချင်တာအတွက်ဝယ်ယူခွင့် ပါမစ်ကရှိပြီးသား အများတကာ အားကျရတဲ့သူတွေပေါ့။
တိုင်းပြည်အတွက် ရှေ့ကနေဦးဆောင်လို့အနစ်နာခံပေးသူတွေ အတွက်
“အထူးလူ” ဖြစ်အောင် ဖန်တီးယူကြပါတော့တယ်။
အကူအညီယူ၊တောင်းပန်ခယ လက်ဆောင်ပေး စတဲ့နည်းတွေနဲ့“အထူးလူ”ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို
လူအများနဲ့ဆက်သွယ်နေရတဲ့ဌာနက ၀န်ထမ်းတွေအတွက် စားကွက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။
ရောင်းချဘို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ အရေအတွက်ထဲကနေ “အထူးလူ”အတွက်နာမည်တတ်လို့
သူတို့ကို အသုံးချပြီးလုပ်စားနေကြတာကို သိလား မသိဘူးလားဆိုတာကတော့
ပိုခက်သထက်ခက်ခဲ ပိုရှားသထက်ရှား စိတ်ပျက်စရာကောင်းပေမယ့်လဲ
ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ ခေါင်းငုံ့ခံရုံမှတပါး အခြားမရှိပါ။
“အထူးလူ”တွေကို အမှီပြုလို့ “အထူးနေရာ”တွေပေါ်ပေါက်လာတာကတော့
ဘုရားဖူးသွားချိန်နဲ့ “အထူးလူ”လာချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေရင် ဘုရားဖူးခွင့် ဆုံးရှုံးပါတယ်။
“ကြက်တူရွေးက တော်တော် မယ်ဘော်ကကဲ”၊ဆိုတဲ့စကားပုံလေးကို အဲဒီအချိန်မှာသိပ်သတိရမိပါတယ်။
လာမယ်ဆိုတဲ့“အထူးလူ”က ဘယ်အချိန်မှလာမယ်ဆိုတာမသိဘဲ ဟိုနေရာမ၀င်ရ ဒီနေရာမထိုင်ရ
တစ်ခါမှာတော့ ကျနော် ဘုရားကြီးကိုရောက်ချိန်မှာ ဘုရားဖူးကားတစ်စီးလဲရောက်နေချိန်နဲ့ကြုံပါတယ်။
ဘုရားထဲရောက်တာ့ အတွင်းထဲကို ၀င်တဲ့နေရာလေးမှာ သံဇကာလေးတွေချလို့ ပိတ်ထားပါတယ်။
အဲတော့ အတွင်းတော်ထဲထိဝင်လို့မရတော့ အပြင်ကဘဲဦးချရပါတယ်။
ကျနော်ဘုရားဖူးပြီးတဲ့အခါ မှဝတ် ပြုလို့ မပြီးသေးဘဲကျန်နေသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို
ဘုရားဖူးအဖွဲ့ကလို့ ယူဆရတဲ့လူတစ်ယောက်က ကျနော်ကိုစကားစလာပါတယ်။
“ခင်ဗျားတို့ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။အခုလိုပိတ်ထားတာနဲ့ကြုံရင်နောက်ရက်လာလို့ ရတာပေါ့။
ကျနော်တို့လို တနယ်တကျေးကလာတဲ့သူ ကားရပ်ချိန်နာရီဝက်လောက်လေးမှာ ဖူးခွင့်မကြုံရင် နောက်တစ်ခေါက်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ”
ဒီရွှေဆိုင်းလေးကို နောက်ရက်ကျရင် ဒူးတော်နားကို ရွှေချပေးထားပါဗျာ၊
ပြောနေရင်းတန်းလန်းသူတို့လိုက်လာတဲ့ ဘုရားဖူးယာဉ်က ထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးလာခေါ်နေတော့
နာမယ်တောင် မသိလိုက်ရတဲ့ မိတ်ဆွေက နုတ်ဆက်လို့ထွက်အသွား၊
အိမ်နဲ့နီးပေမယ့် ဘုရားကြီး ကိုသိပ်မရောက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
အဲဒီဘုရားတွေက နေရာကျယ်ပြန့်ပြီး လူအလာနည်းတော့ အေးဆေးငြိမ်သက်တာကြောင့်ပါ။
တစ်ခါတစ်လေတော့ လဲ အခုဆောက်လက်စ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးက ပေါ်တော်မူငါးဆူကိုသွားပါတယ်။
(နေသိပ်မပူသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် မြစ်ပြင်ကိုဖြတ်လာတဲ့လေအေးအေးလေးကိုရှုရတာ အရသာရှိလွန်းလို့ပါ။)
နည်းနည်းဝေးတာကိုသွားချင်ရင် အချိန်လဲရတယ်ဆိုရင် တောင်သမန်အင်းနံဘေးက ပုထိုးတော်ကြီးတို့
ပြီးခဲ့တဲ့ ဥပုဒ်နေ့ကတော့ မိုးတွေရွာပါတယ်။
အဲတော့ အိမ်နဲ့နီးတဲ့ဘုရားကြီးကို ဘဲသွားဘို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘုရားအရှေ့တော် အမျိုးသမီးများ ကျော်လွန်လို့ မသွားရတဲ့ဘုရားပန်းအိုးများချထားတဲ့
နောက်မှာတော့ သံဇကာလေးတွေကာလို့ ခြံခတ်ထားပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာတော့ မိသားစုသုံးယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်။
သူတို့နောက်က သာမန်လူတွေဖူးဘို့ ပေးထားတဲ့နေရာမှာတော့ တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ပူးပူးကပ်ကပ်
ဘေးမှာ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ရို့ရို့ကျုိုးကျိုး။
သူတို့ဘေးမှာ ဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်ပေးဘို့ အဆင်သင့်ရပ်နေတဲ့ အဲဒီကောင်လေးက
ဆွမ်းတော်ကပ်လို့ရတယ် အအေးကပ်လို့ရတယ် ဆီမီးပူဇော်လို့ရတယ်လို့ တတွတ်တွတ်ပြောနေပါတယ်။
ခဏနေတော့ အအေးကပ်မယ်ဆိုတော့ စပရိုက်အအေးဘူးလေးတွေကို အဲဒီကောင်လေးကဖောက်ထည့်ပေး
ခဏနေတော့ ဘုရားဖူးတဲ့တစ်ဖွဲ့က အထဲဝင်မလုပ်တော့ အဲဒီကောင်လေးက မ၀င်ရဘူးဆိုပြီးသံဇကာကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ဘုရားဖူးလာတဲ့အဖွဲ့က ဘာမှမပြောပေမယ့် သိပ်အစာမကျေတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ပေါ့။
အဲဒီသီးသန့်နေရာကမိသားစုထဲက တစ်ယောက်ကတော့ မျက်စေ့လေးမှိတ်လို့ တတွတ်တွတ်ရွတ်။
ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကတော့ ခေါင်းခြင်းဆိုင်ပြီး တတွတ်တွတ်နဲ့အဆက်မပြတ်ပြော။
သူတို့အတွက်ကတော့ ဘုရားဖူးရတာ အေးဆေးငြင်သာပါဘဲ။
ကျနော်လဲ ဆက်မမြင်ခြင်တော့တာနဲ့ စေတီတော်ကို တပါတ်ပါတ်ပြီးလျောက်သွားနေလိုက်ပါတယ်။
စောစောက ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ကောင်လေးက အအေးဗန်းကလေးကိုသယ်ပြီး သူတို့အတွက်ပေးထားတဲ့
နေရာလေးကို ယူသွားတာမြင်လိုက်ရတော့ ပြုံးမိပါတယ်။
တကယ်ကို တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ နိုင်ငံအကြီးအကဲများ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တော်များ ရဟန်းသံဃာများ
နာမကျန်းသော သက်ကြီး ၀ါကြီးများအတွက် “အထူးနေရာ ”ပေးတာကိုလုံးဝလက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သာမန်သူလိုငါလို လူတွေကို အခုလို သီးသန့်နေရာပေးထားတာကတော့ မှားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဟိုအရင်ခေတ်များက ကျင့်သုံးခဲ့ကြ အခွင့်အရေးယူခဲ့ကြတဲ့ ဒီ“အထူးလူ” “အထူးနေရာ”ဆိုတဲ့စနစ်ကြီးကတော့
“မယ်ဘော်”တွေကိုလဲ “အသာလုပ်ပါ “လို့တောင်းပန်ရုံကလွဲလို့……………………………………….
နောက်ဘုရားကြီးမှာမြင်တွေ့ နေရတာတစ်ခုကတော့ ဘုရားဖူးမယ်လို့ဝင်လိုက်တာနဲ့ မျက်နှာသစ်တော်ရေထည့်ထားတဲ့
ဗူးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တော်ကျ တစ်ဘက်လေးတွေကို ထိုးထဲ့ပေးတာပါဘဲ။
ကျွန်တော်လည်း ကြုံခဲ့ဘူးတယ်။ အထူးလူတွေကို။
လဖက်ရည်ဆိုင်က ဇွန်းတတ်ထားတဲ့ လဖက်ရည်ခွက်လေးတွေနဲ့
အဲဒီအထူးလူတွေနဲ့ တူတယ်ဗျ။ သူတို့ကလည်း ဇွန်းတတ်ထားတဲ့
ကျုပ်မွေးနေ့ တုန်းက ဗျာ
ရွှေဆိုင်း ရောင်းတဲ့ကောင်တာ မှာ ရွှေဆိုင်းဝယ်မလို့ ၊ ၅ ခု ပေါ့ဗျာ
ကျုပ် က လွယ်အိတ်နဲ့ ဆိုတော့ ၊ လွယ်အိတ်ထဲက နေ ပိုက်ဆံအိတ်ထုတ်နေရင်း
မှာလိုက်တယ် ။ အရောင်းသမား ကိုယ်တော်ချောက သူ့ ကို မပြောတဲ့အတိုင်း ၊တုတ်တုတ် မလှုပ်ဗျာ
ပိုက်ဆံအိတ် ထုတ်ပြီး ၊ ကျသင့်သလောက် ပိုက်ဆံ ထုတ်ပြီး သူ့ ကို လှမ်းပေးတော့မှ
ရွှေဆိုင်းတွေကို စကိုင်ပြီး ၅ ခု ပေးလာပါတယ် ။
ကသိကအောင့် ဖြစ်အောင် အကျိုးဆောင်ပုံများ ။ မှတ်သားလောက်တယ် ဗျ ။
အမှန်ဆို ၊ ပိုက်ဆံရမှ ပေးမယ် ဆိုတာ နားလည်ပေမယ့် ၊ ပိုက်ဆံမရခင်တော့ မှာတဲ့ အရေအတွက် ကို တော့ ထုတ်ထားသင့်တယ် လို့ ထင်တာဘဲ ။
အထူးလူထက်ထူးတဲ့ ထူးရှယ်၊ ပိုထူးတဲ့ ထူးထူးရှယ် ရှယ်တကာ့ရှယ် တွေလည်း ရှိသေးတယ် ကိုပေါက်ရေ။
ရှင်တို့ က ရဲဒွေပဲဟာ
ဦးပေါက်ပြောတဲ့ အထူးလူဆိုတာ လူတောမတိုးတဲ့ လူရာမ၀င်တဲ့လူတွေကို ခေါ်တာဖြစ်မယ်…။
မဟုတ်ဘူးဗျ မသွားဘဲ အားမစိုက်ဘဲ ရှေ့အလိုလိုရောက်နေတဲ့သူတွေပါ။
အထူးလူကားတန်းလာလို့ဆိုပြီး ရှေ့ ဆုံးက”ဝီးဝမ်…ဝီးဝမ်…” သံတွေကြားရင်
အဲဒါမျိုးတွေကို လေဥ(ခေါ်)လိပ်ဥ လို့ခေါ်ပါကြောင်း ကံအကြောင်းတရားကြောင့် ကံကောင်းလို့သာ ခနတာ နေရာယူနဲ့ အခွင့်အရေးယူလို့ရမယ် တကယ်ကိုယ်ပိုင်အရေအချင်းမရှိတာမို့ လူကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့တလောကလုံးသာယာလိုက်သမျှပေါ့ဗျာ(သံပတ်ပေးထားတဲ့အရုပ်လေးလိုပါပဲ)အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကျပြီဆိုရင်
သူများတွေထက်နာပါတယ် (အထူးသဖြင့်သူတို့သားသမီးတွေပေါ့ဗျာ)တော်တော်များများကိုတွေ့ဘူးတယ် (ချောက်တလွဲတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်)
မောင်မိုးညို အင်းလေးဒေသမှာတာဝန်ကျစဉ်ကပါ။ ခုလိုသတင်းကျွတ် ကာလမှာ ညောင်ရွှေမြို့ကိုတက်ပြီး တောင်ကြီးကိုဆွဲတဲ့ ပစ်ကပ်ခရီးသည်ကားပေါ်တက်ထိုင်စောင့်နေမိပါတယ်။ အတော်ကြာတဲ့အထိ ကားကမထွက်သေးလို့ စုံစမ်းကြည့်တော့ ဒီလိုသတင်းထွက်လာပါတယ်။ ဖေါင်တော်ဦးဘုရားတွေကိုပင့်ဘို့တောင်ကြီးကတိုင်းမှူးဆင်းလာမှာမို့ ကားလမ်းတွေပိတ်ထားတယ် တဲ့။ ဒါနဲ့ ခရီးသည်အဖိုးကြီးပြောတဲ့စကား မှတ်ချက်ကလေးသွားသတိရပါတယ်။ ဘာတဲ့ – “ဘုရားထက် ဘုရားပင့်မဲ့လူကပိုတန်ခိုးကြီးနေတယ် “- တဲ့။ အပင့်ခံမဲ့ဘုရားက ပင့်မဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုစောင့်နေရလေရဲ့လေ…။
ကိုပေါက် ရဲ့ အထူး အထူးတွေကို ကို အားကျလို့ နာမည်တောင် ထူး လို ပြောင်းရင် ကောင်းမလား တွေးမိလာတယ်။
ထူးတညင်သား ………စမ်းကြည့်တာ :p :p
နေရာတိုင်းမှာ အမြဲတွေ့နေရတဲ့ ဦးပေါက်ပြောတဲ့ အထူးလူတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစာမကြေဖြစ်နေတဲ့ အချိန် ဒီပို့စ် လေး ဖတ်လိုက်ရတော့ နဲနဲပေါ့သွားတယ် ၊ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
ဒီရွာလေးအောင်မြင်တာမှာ သူကြီးရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ရွာသားတွေရဲ့ညီညွတ်မှုကြောင့် အထူးလူ ဆိုတဲ့သူတွေ မရှိလို့ ဆိုတာ တစ်ချက်ပါမယ်ထင်တယ်
ကားလမ်းတွေမှာ ဝါးလုံးတား ပိုက်ဆံတောင်းနေတာတွေ့ရင် ရှေ့ကားမီးကြီး ကို နှစ်ချက်တောက် (ဖွင့်ပိတ်) ပြလိုက်ပြီး ဖြတ်မောင်းလိုက်တယ်။
အဲဒါက ကိုပေါက်ပြောတဲ့ “အထူးလူ”ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း၊ “အထူးလူ”ရဲ့ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟ၊ “အထူးလူ”ရဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ မိတ်ဆွေတွေက လုပ်နေကြ။
တစ်ခါမှတော့ တားမေးတာ မတွေ့ရသေးဘူး။ မေးရင်တော့ ပြောမှာပေါ့ မီးခလုပ် စမ်းကြည့်တာလို့။
ကိုပေါက်ပြောတဲ့ “အထူးလူ” ပုံစံနဲ့ “အထူးလူ”ကိုကြောက်ကြတဲ့ “အထူလူ” တွေကိုလုပ်လိုက်တာပါ။:D
အဲဒါက “အထူးလူ” ကားဆို “ရိုးရိုးလူ” ကားလို လမ်းဖြတ်ခမပေးရလေတော့ ကိုပေါက်ပြောတဲ့ “အထူးလူ”ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း၊ “အထူးလူ”ရဲ့ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟ၊ “အထူးလူ”ရဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ မိတ်ဆွေတွေက လုပ်နေကြ။ တစ်ခါမှတော့ တားမေးတာ မတွေ့ရသေးဘူး။ မေးရင်တော့ ပြောမှာပေါ့ မီးခလုပ် စမ်းကြည့်တာလို့။
ဒါလဲ ကုသုလ်ကံတစ်မျိုးပဲနေမှာပေါ့နော် ….
လူချင်းယှဉ်လို့ရပေမယ့် ကံချင်းယှဉ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ သဘောပဲနဲ့တူပါတယ် …
2005 ခုနှစ်မှာ မောင်အငယ်ဆုံးလေး နိုင်ငံခြားကို အလုပ်သွားလုပ်ပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ တစ်ခါမှလဲ မခွဲဘူးတဲ့အပြင် အငယ်ဆုံး မောင်လေး ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်တာနဲ့ အတူ စိတ်မချပါဖြစ်ရပါတယ်။
တစ်မိသားစုလုံး ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို လိုက်ပို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက လေဆိပ်က အဟောင်းပါ။
အခုလေဆိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ လေဆိပ်ဝင်း အပြင်မှာက သံတိုင်နဲ့ ခြံဝင်းခတ်ထားပါတယ်။
ဖြစ်ပုံက အဲ့ဒီနေ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဦးပေါက်ပြောတဲ့ အထူးလု တွေ လမ်းကြောင်းရှိလို့ပါတဲ့။
ခြံဝင်းထဲကို ခရီးသွားမယ့်သူက လွဲလို့ လိုက်ပို့တဲ့သူတွေ မ၀င်ရပါဘူးတဲ့။
ပြည်ပထွက်ခွါ တွေကို မိသားစုတွေက အထဲထိ လိုက်ပို့ခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့လေ။
စဉ်းစားကြည့်ပါ။3နှစ်လုံးလုံး မိသားစုနဲ့ ခွဲသွားရမယ့်သူကို ကျွန်မတို့က လေဆိပ်အပြင်ဘက် ခြံဝင်း ရဲ့ အပြင်ဘက် ကားလမ်းမပေါ်ကနေ စောင့်ပြီး ရပ်ကြည့်နေရုံမှ တစ်ပါး မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ကားပေါ်က ဆင်းပြီးကတည်းက မောင်လေးနဲ့တစ်ခါတည်း နှုတ်ဆက်လိုက်ရတာပါ။ နောက်တစ်ခေါက် မြင်ကိုမမြင်ရတော့တာပါ။
အဲ့ဒီကတည်းက VIP ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတွေကို စိတ်ကုန်ပါတယ်။
သူတို့ကိစ္စမှ ကိစ္စလို့ထင်တာ၊ သူတို့ သားသမီးမှ သားသမီးလို့ထင်တာ၊ သူတို့မိသားစုမှ မိသားစုလို့ထင်တတ်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိနေတဲ့ လူတန်းစားကို VIP လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဦးပေါက်က ဆုတောင်းမှ မကောင်းခဲ့တာကိုးဗျ။ အဲသလိုပြောပြန်ရင်လည်း အဓမ္မဝါဒီ သဂျီးက အချောင်ဝင်တီးအုံးမယ်။ မတတ်နိုင်ဘူး၊ ဖြစ်နေတာကိုး။ အာဏာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ လက်နက်အားကိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့်တယ်။ အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ ငွေနဲ့ပေါက်ယူတယ်။ အကြောင်းအကျိုးပဲဗျာ။ ရတဲ့သူတွေတုန်းကရလို့ နောက်လူတွေဆက်လုပ်တယ်။ တချိန်မှာ မခံနိုင်တော့ ပေါက်ကွဲထွက်တယ်။ ဆုတောင်းမကောင်းခဲ့သူများ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ခံရတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဆုတောင်းကောင်းပြီး ရတဲ့အခွင့်အရေး တလွဲသုံးသူများကြတော့လည်း စိတ်ထားမြတ်ခဲ့ရင် ကံဆက်မယ်၊ စိတ်မထားတတ်ခဲ့ရင် ကံပြတ်မယ်ပေါ့ဗျာ။ သာမန်တွေးရင် ဘုရားကြီးကို အနီးကပ်ဖူးလို့ ရတဲ့သဒ္ဓါစိတ်နဲ့ အဝေးကနေ ဖူးရတဲ့စိတ် (ရှေ့တိုးခွင့်မရလို့ ဒေါသကလည်းထွက်နေ) နှစ်ခုမှာ ဘယ်စိတ်က ပိုမြတ်မလည်း သိနိုင်ပါတယ်။
မင်းခံစားတတ်သွားအောင် မင်းကိုပေးမယ်ပြောထားတဲ့တူမလဲ အထူးလူနဲ့ပေးစားလိုက်တော့မယ်။
ဒါမှ ငါလဲ အထူးဦးလေး ဖြစ်သွားအောင်
ကိုကြောင်ကြီးက ကိုပေါက်တူမကိုလည်း တောင်းထားသေးတာလား။
ကဲ ဒီလူလုပ်ပုံ ကြည့်စမ်း၊ တီချာ့တူမကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးပါ ကြောင်ကြီးရှက်ရှက်
တွေ လုပ်နေလို့ CV တောင်းထားတာတော်။ သူ့ CV ထဲမှာ VIP လို့ ရေးနေမလားနော်။
အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး သတိရ သဗျား…။ သူသေတော့ ခေါင်းအပြင်ဘက် လက်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြီး သဲဂြိုလ်ဖို့ သုဿန်ထုတ်ခိုင်းသတဲ့…။
ဒါပေ့မယ် အထူလူတွေက သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးရယ်
အထူးလူ အထူးနေရာ အခု ဘတ်စ်ကားတောင်မှ ရိုးရိုးကားမဟုတ်တော့ဘူး အထူးကားတဲ့ … ဒါပေသိ အထူးလူတို့သွားတဲ့ အထူးနေရာလို သက်တောင့်သက်သာ ညင်ညင်သာသာ အေးအေးချမ်းချမ်းမဟုတ် ကြပ်ပိတ်သိပ်နေတဲ့ အထူးကား …
အထူးလူများ ဘေး မှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ..
သူတို့ဖူးရတဲ့နေရာက ဘုရားရဲ့ မကိုဋ်တော်လေးတောင် မတွေ့ ရလို့တဲ့
မန်းလေးကပြန်လာတဲ့ အဒေါ်တယောက်တော့ ဒေါကီးနေတယ်
အထက်ရောက်သွားသူက အောက်လူကို ကိုယ်ချင်းစာရင် ဒီအထူးလူဆိုတာတွေပျောက်သွားမှာအမှန်ပါဘဲ.
အထူးအထူးနဲ့ ရူးမသွားကြပါစေနဲ့လို့ အဲ့လူတွေအတွက် ဆုတောင်းချင်သဗျာ…။
ပုံပြင် ထဲကလို ပေါ့၊သူ့ ခေါင်း ဗျိုင်းနားတော့ သူ့သဘောပေါ့လေ။ စိတ်ထဲက ထုတ်ထားရင် သက်သာပါတယ် လေ။ ဒါပေမယ့် ရောဂါ ဖြစ်ရင် တော့ အထူးကု နဲ့ ကု ကြဗျို့။ လစ် သွားအုံးမယ်။